Semporin’ny Olompirenena Amin’ny Tatitra Mikasika Ny Angona Mampiahiahy Momba Ireo Mpifidy Ny Vaomiera Makedoniana Misahana Ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2016 2:27 GMT
Ampahany amin'ny fampisehoan'ny hetsipanoherana antsoina hoe “manome trano fonenana i Makedonia”, nokarakaraina ao Skopje tamin'ny 15 Febroary. Mpikatroka mitàna karatra sandoka mba hanehoana ny hosoka tamin'ny vokatry ny fifidianana tsy ela akory izay. Sary an'i Vancho Dzambaski (CC BY-NC-SA).
Herinandro latsaka taorian'ny nampidiran'ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana – State Election Commission (SEC) – fomba iray tao amin'ny fampiasa ao amin'ny tranonkalan-dry zareo mamela ireo olompirenena hitatitra ny tsy fetezana hita any anaty Lisitry ny Mpifidy, nakaton-dry zareo ilay izy.
Tao anatin'ny fotoana teo anelanelan'ny namoahana ilay fampiasa sy ny 13 Martsa, rehefa nisy olona manodidina ny 5.000 no nametraka angon-draktra mampiahiahy. Ny antony ofisialy naroso ho anton'ny fampiatoana ilay fanaovana tatitra ety anaty aterineto, araka ny nambaran'ny SEC, dia satria toa hoe be ny asan-dry zareo niraraka avy amin'io, no sady tsy ampy ny fahaizamanaony hiatrehana izany:
“Mila fotoana betsaka ny SEC mba handinihana ireo tsy fetezana voatatira sy hampitahàna azy ireny amin'ny angon-drakitra niarahana nanamarina ka hamaritana izay tranga tokony ho asiana maso,” hoy ny nambaran'ny SEC tao anatin'ilay fanambaràna ofisialy omaly.
Nokaramaina hanao fanamarinana ny Lisitry ny Mpifidy ny SEC, amin'ny fampitahàna izany amin'ireo angon-drakitry ny andrim-panjakana 10 hafa, ka isan'izany ny an'ny Ministeran'ny Atitany, ny Biraon'ny Asam-panjakana, ny Biraon'ny Antontanisam-panjakana, ny Masoivohon'ny Asa, ary ny Banky Nasionaly.
Ny 16 Martsa, horesahana mandritry ny fivoriana azon'ny daholobe atrehana ireo vokatry ny fampitahàna ny lisitra, ary avy hatrany aorian'izay dia hatombok'izy ireo ny fanomanana ireo tranga mila asiana maso — rehefa omen'ny SEC ny adiresin'ireo toerana nitateran'ny olona ny fisianà tsy fetezan-javatra.
Ao anatin'ny tatitra nataony momba ny fampiatoana ilay fitaovana, nampian'ny SEC hoe ny olompirenena rehetra izay maniry ny hitatitra tsy fetezana tao anaty Lisitry ny Mpifidy dia mbola afaka manao izany, saingy mandeha mivantana any amin'ny biraon'izy ireo manerana ny firenena.
Efa an-taona maro no noahiahiana ny fisian'ny hosoka amin'ny fifidianana tao Makedonia. Kanefa, ho ampahany amin'ny fifanarahana hampitsaharana ny krizy politika eo amin'ny firenena, izao ireo manampahefana vao mba manao fanadihadiana ireo honohono anondroana ny mpiasan'ny governemanta ho mitsabaka amin'ny resaka fifidianana hiantohana ny fandresean'ny antoko eo amin'ny fitondrana, ny VMRO-DPMNE.
Ny 3 Martsa, namoaka dika vaovao amin'ilay fampiasa ny SEC, izay ahafahan'ireo mpampiasa azy manamafy ny sàtany ao anatin'ny Lisitry ny Mpifidy, taorian'ny herinandro maro tsy nahafahana niditra tamin'izy io noho ny resaka olana ara-piarovana. Vetivety foana ireo olompirenena dia nanomboka nanambatra ny angon-drakitra momba ireo matoatoa mpifidy, nandefa ny porofo avy amin'izy ireo tao amin'ny media sosialy mikasika ireo anarana tsy fantatra voarakitra ao an-tranon-dry zareo, na ireo havana efa maty nefa mbola ao anaty lisitra.
Ny 9 Martsa, namoaka iray hafa ny SEC hahafahan'ireny olompirenena mpitsongodia ireny mitatitra ety anaty aterineto ny tsy fetezanjavatra hitany fa tsy voatery handeha mivantana any amin'ny birao. Andro efatra taty aoriana, nanambara ry zareo fa hakàtony ilay fitaovana satria be loatra ireo tatitra voarainy.
‘Hahakivy ny fanaovan'ny olompirenena tatitra io’
Teny anivon'ny vondrom-piarahmonina ety anaty aterineto, niteraka fanehoankevitra nivaivay ilay fanapahankevitra,. Ao amin'ny Facebook, Nebojsa Gelevski, mpikatroka iray no sady mpanome endrika avy ao Skopje, nanontany ampahibemaso hoe “Fa inona no tsy mety ao amin'ny SEC ao e?!” ary nilaza fa tsy ny 10% akory amin'ireo olona maniry hitatitra tsy fetezanjavatra no mety hanao izany mivantana, raha ny marina:
Raha tokony hanao tatitra ety anaty aterineto, ankehitriny ve isika tsy maintsy mikaroka ireo biraon'ny SEC tsy fantatra hoe aiza?! Hahakivy ny fanaovan'ny olompirenena tatitra io, tsy hisy 10% amin'ireo manana fitarainana no hanao ezaka handeha hanitsaka ny tokontanin'ny birao. Manamora ny asan'ny SEC io, saingy mifanohitra tanteraka amin'ny tanjona ho fanadiovana ny Lisitry ny Mpifidy.
Tao amin'ny Twitter ny hafa no naneho hevitra, tamin'ny filazana fa nihazakazahana tsy amin'antony ilay fanapahankevitra.
Nakaton-dry zareo ilay fitaterana ety anaty aterineto ny #AllFromTheList (avy ao anaty lisitra daholo) tao amin'ny tranonkalan'ny SEC. Efa 12 taona no niandrasantsika fanisàmbahoaka, ary ankehitriny nihazakazahan-dry zareo tao anatin'ny roa herinandro ny nanakatona araka ny lalàna ilay fampitahàna *tehaka*
Raha ny marina dia efa 14 taona no lasa hatramin'ny nisian'ny fanisàmbahoaka farany, ilay natao tamin'ny 2002. Izany isa izany no nametraka ny isan'ny mponina ho maherin'ny 2 tapitrisa monja, nametraka ny fitambaran'ireo mpifidy ao amin'ny frenena voarakitra anaty lisitra ho faran'izay mampiahiahy — 1.8 million. Takian'ny lalàna Makedoniana ny hanaovan'ny governemanta fanisàmbahoaa isaky ny 10 taona, saingy tamin'ny 2011 ireo manampahefana dia nampiato teny anelanelam-potoana teny ny fanisàmbahoaka, tsy nanomezany fanazavàna izay antony.
Matahotra ireo fikambanana sivily nanao fanarahamaso ny fanadiovana ny Lisitry ny Mpifidy tany alohan'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny Jona fa hoe ilay fanakatonana ny fanaovana tatitra ety anaty aterineto dia ho fitaratry ny pentina mainty henjana be ao anatin'ny dingana manontolo momba ny fifidianana.
Etsy ankilany, ny Praiminisitra Emil Dimitriev, izay nisolo an'i Nikola Gruevski tamin'ny Janoary taorian'ny nametrahany fialàna, nilaza fa ireo tatitra rehetra momba ny olana tamin'ny lisitry ny Mpfidy dia tokony hojeren'ny SEC akaiky, nefa koa nampangainy ny mpanohitra ho “nanao resabe” tamin'ilay fanadiovana ny lisitra :
Raisinay an-tanandroa daholo izay tatitra avy amin'ny olompirenena momba ny lisitry ny mpifidy. Mila hazavaina tsara fotsiny izy ireny [sic] dia hanampy amin'ny fandraisana anjara haingana amin'ny fanadiovana ity resabe nateraky ny fandinihana ny lisitry ny mpifidy ity. Fantatry ny Vaomieram-Pirenena misahana ny Fifidianana ny lalàna mifehy azy ary hojereny daholo ireo lalàna sy fepetra mifandraika amin'izany. Tamin'ny fihaonako tamin'ny SEC ny Alakamisy teo, nambara tamiko fa ao anatin'ny fotoana tena fohy dia hodinihana daholo ireny tatitra ireny, satria ny fepotoana farany hamaliana ny tsirairay dia eo anelanelan'ny telo hatramin'ny dimy andro.